နည်ပညာများ – အခမဲ့
YANGON — A Korea-based company has inquired the Ministry of Religious Affairs and Culture about buildinga100-meter sunset viewing tower in Bagan. Sky Dream Co Ltd of Korea …
ဂီယာလဲနံပါတ်3အထိပဲချိန်းပြီး 4တက်မလာ ကားကမဆွဲဘူး လေးနေတယ်ဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါ (ဂီယာဘောက်စ် ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာ )
Toyota Kluger ​လေးတစ်စီးအ​ကြောင်း​ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက​တော့ဂီယာ​ဘောက်​အတွင်းမှာတက်​တက်​နဲ့မြည်​​နေပြီးဂီယာအကုန်​မချိန်းတာပါ။တစ်ခြား​ Auto Service မှာပြကြည့်​​တော့ဂီယာ​ဘောက်​လဲရမယ်ဆိုလို့အကိုတို့ဆိုင်​လာပြကြည့်တာဆိုပြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်​စမ်းကြည့်​​တော့ဟုတ်​ပါတယ် ​ဂီယာနံပါတ်​3အထိပဲတက်​ပါတယ်။​ဂီယာ​ဘောက်​ထဲမှာလဲတက်​တက်​အသံမြည်​​နေပါတယ်။ကဲ အဲ့ဒါနဲ့​ဘောနက်​ဖွင့်နတ်​​လေးကျပ်​ပြီး ​ရပြီအကို​မောင်းစမ်းကြည့်​ရ​အောင်​ဆို​တော့ ကိုယ့်​ဆရာကမယုံသလိုအကြည့်​နဲ့​မောင်းစမ်းကြည့်​​တော့ဂီယာ​ဘောက်​ထဲကအသံ​ပျောက်​ပြီးဂီယာ no4အထိချိန်းသွားပါတယ်​။ကားလည်း​ပေါ့ပြီး​မောင်းလို့​ကောင်းသွားပါတယ်။​ ကျွန်တော်​စိတ်​တိုင်းကျစမ်းပြီး အကို​မောင်းစမ်းကြည့်​ဗျာလို့ပြောပြီးစမ်းခိုင်းလိုက်တော့ ဟာ!ကားက​ကောင်းသွားပြီပဲ အ​တော်​​ပေါ့သွားတယ် ကျွန်တော်​ဖြင့်​​ဂီယာ​ဘောက်​ချရ​တော့မယ်​ထင်​​နေတာ ​ကျေးဇူးပါအကိုရေ ဒါနဲ့ဘယ်​လိုလုပ်​လိုက်​တာလဲဗျာ​ပြောပါအုံးတဲ့။ အကို​ရေကျွန်တော်အရင်​ကအကို့ကားလိုတစ်စီးကြုံဖူးတယ်​။အ​ဖြေမသိခင်​တုန်းက​တော့​ခေါင်းပါမီး​တောက်​သွားတယ်​ဗျာ။ဖြစ်​ပုံကကားကကျွန်တော်​တို့ဆီမှာပလပ်​လာစစ်​တာဗျ။ကျွန်တော်စမ်း​မောင်းကြည့်​​တော့အကို့ကားလိုပဲ ကားကမဆွဲဘူး ဂီယာလဲနံပါတ်3အထိပဲချိန်းတာ …
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖျာပုံပေါ်ဆန်း နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး အုန်းနို့ ၁ ဘူး (၂၅၀ ml) သကြား ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း ဆီ ဇွန်း ၁ ဇွန်း ကြက်သွန်နီ ၄ လုံး စိတ်ထည့် ချက်နည်း ဆန်ကို ရေ …
ကားထဲမှာပိတ်မိနေရင် ဘယ်လိုဖေါက်ထွက်မလဲ Share တချက်ဖြင့် အသက်ကယ်နိုင်ပါစေ
ကားလော့ကျသွားလို့ဖြစ်စေ။ မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် Driver ၏ အကူအညီမရတော့ဘဲ အရေးပေါ်ကားထဲကထွက်ရတော့မယ့်အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်စေ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ တံခါးများဖွင့်မရ ထွက်မရသည့်အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့လာချိန်ဖြစ်စေ။ ကားထဲကထွက်ရန်အတွက် ကားမှန်အားရိုက်ခွဲရန် လက်နက်တစ်စုံတရာ မရှိခဲ့လျှင် မတွေ့ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ။ တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ပါလျှင်။ အထက်ပါအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့လာပါက ကားမှန်အားရိုက်ခွဲ၍ ကားအပြင်သို့ထွက်ပါ ကားမှန်အားရိုက်ခွဲရန် ခြေထောက် လက်သီးတို့ဖြင့် အဆင်မပြေ ပုံပါအတိုင်းသာအဆင်ပြေပါသည်။ ကားထိုင်ခုံနောက်မှီ၏ ခေါင်းမှီးအား ပုံ(၁) ပုံ(၂) …
ကိုယ်တိုင် Organic ဆပ်ပြာရည် ပြုလုပ်နည်း
သံပုရာသီး ၃ပိသာ ထင်းပြာ ၁ပြည် (သန့်စင်ပြီး) ဆပ်ပြာဂျယ် ၂ကီလို အုန်းဆီမွှေး ၅ကျပ်သား နေကြာဆီ ၅ကျပ်သား သံလွင်ဆီ ၃ကျပ်သား သစ်စိမ့်ဆီ ၃ကျပ်သား (မရှိပါက မထည့်လည်းရပါသည်) ဆားဖြူ ၁၀သား သကြားဖြူ ၁၀သား ပြုလုပ်ပုံ သံပုရာသီးကို ရေသင့်သလိုထဲ့ပြီး ပျစ်လာသည်ထိကျိုပါ။ ထင်းပြာတစ်ပြည်ကိုရေ ၄ လီတာနဲ့ ၃ …
ငှက်ကလေးရဲ့ ကျောပေါ်က ပစ္စည်းက ဘာလဲ?
ဒီနေ့ လူပြောများနေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်က ဘာလဲဆိုရင် စက်ပစ္စည်းကရိယာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ သိန်းငှက်တစ်ကောင် ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ…ဒါပေမဲ့ အဲဒီစက်ပစ္စည်း ကရိယာလေးဟာ ဘာလဲဆိုတာ လူအများမသိကြပါဘူး. ကျွန်တော် ပြောပြပါ့မယ် အဲဒီ သိန်းငှက်ရဲ့ကျောရိုးပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကရိယာလေးကို (Transmitter)လို့ခေါ်ပါတယ်။ Transmitter’ဆိုတာက ရုပ်သံလွှင့်စက်၊ဖြန့်လွှင့်သည့်စက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော့ ထူးဆန်းရင် ထူးဆန်းပါလိမ့်မယ်…. အနောက်နိုင်ငံက သုတေသိပညာရှင်များနှင့် သတင်းသမားတွေဟာ သိန်းငှက်၊လင်းယုန်၊စွန်၊ဇီးကွက်နှင့်အခြားသော …
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ငါး ၆၀သားခန့် ၁ကောင် စပါးလင် ၂ဥ ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီး၁၀မွှာခန့် ငရုပ်စိမ်း ၁၅တောင့်ခန့် သံပုရာသီး ၃လုံး နံနံပင် ၃ပင် သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း ငါးငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်း ဟင်းခတ်ကြက်သားမှူန့် လက်ဖက်ဇွန်း၁ဇွန်း ရေသန့် ၂လီတာခွဲခန့် ပြုလုပ်နည်း လပ်​ဆပ်​​သော ‌ရေချို ကကတစ်‌ ငါးကို …
ထရန်စဖော်မာ ပတ်နည်း (1) ထရန်စဖော်မာ တစ်လုံးကို ပတ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အခြေခံထားပြီး တွက်ရမည့် အချက်မှာ မိမိသုံးစွဲလိုသည့်ပါဝါ (Watt)ပင် ဖြစ်ပါသည်။ပါဝါကို သိနိုင်ရန် မိမိတို့ အိမ်တွင် တစ်ချိန် တည်း သုံးစွဲသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ ဝပ်များကို စုပေါင်း၍သော်၎င်း မီးအားပြည့်နေချိန်တွင် သုံးစွဲနေသော လျှပ်စီးအင်ပီယာကို တိုင်းတာ၍ အဝင်ဗို့ အားနှင့် မြှောက်ယူ၍သော်၎င်း …
Google ၏ Android System ထဲ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သော သမင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်မလေး ဆုမွန်ကြွယ်
သမင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်မလေး ဆုမွန်ကြွယ်ကို ချိုသာဖော်ရွေပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို့ထင်ပြီး သူ့အိမ်နီးချင်းတွေက အခေါ်အပြော အဆက်အဆံ လုပ်ခဲ့ကြတာ။ သူ Singapore Management University မှာ Information System ပညာရပ်ကို PhD တက်နေတာ ပဉ္စမနှစ်အရောက်မှာတော့ သူဟာ သူများတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို လိုက် Hack ပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတဲ့သူပါလားဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ လူတွေ အရမ်း …
အုန်းသီးတစ်လုံးရှိရင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝအုန်းဆီစစ်စစ် ပြုလုပ်နည်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ ယခု ကျွန်တော် ပြောပြပေးချင်တာက သဘာဝ အုန်းဆီစစ်စစ်ပြုလုပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ နည်း( ၂)မျိုးရှိတယ်။ အချို့က အုန်းဆီရနံ့မွှေးအောင် မီးဖြင့် ချက်လုပ်ကြသလို အချို့ကတော့ ရနံ့ကင်းမဲ့တာကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့် မီးဖြင့်မချက်လုပ်ပဲ ကျန်ရှိတဲ့ နို့အနှစ်ကိုအနည်ထိုင်စေပြီး အပေါ်ယံကိုတက်လာတဲ့အဆီကို အချိန်ယူ၍ ခပ်ယူ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံက အုန်းသီးရင့်ရင့်တစ်လုံး(အခြောက်လုံးဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်)ကို အခွံခွာပြီး အသားကို …